အပေါငျးအသငျးမကျပမေယျ့ ခဈြသူကို အရမျးခဈြတတျတဲ့ တနင်ျဂနှသေားသမီးမြား အကွောငျး – Shwe Yaung News
ခဈြသူအပျေါ အနိုငျယူ လိုတဲ့ စိတျ ရှိတယျ။ ကိုယျ့ခဈြသူကို ကိုယျ့ရဲ့ အလိုကြ အတိုငျး ဖွဈစခေငျြတဲ့သူမြိုး။ အရမျးလညျး ခဈြတတျ ကွတယျ … ။တနင်ျဂနှေ သားသမီးတှကေ အရမျးကွီး မထူးဆနျးပမေယျ့
အခွားလူတှနေဲ့ ကှဲပွားတဲ့ စရိုကျတှကေို ပိုငျဆိုငျထား သူတှပေါ။ဒါကွောငျ့ သူတို့ဟာ အခွားလူတှနေဲ့ ကှဲပွားနတေတျ ကွပါတယျ … ။တနင်ျဂနှေ သားသမီးတှဟော စာဖတျ ဝါသနာ ပါကွတယျ။ ဗဟုသုတကို လိုကျစားတယျ။
အအိပျမကျတယျ။ အစားမကွီးဘူး။ ဒါပမေဲ့ ခဏ ခဏ စားနတေတျ တာမြိုး၊ ဒေါသကွီးပမေဲ့ ကောကျရိုးမီး လိုမြိုး။ခဏပဲ ပွီးရငျ သူမဟုတျ သလိုမြိုး၊ စိတျဆိုး စိတျကောကျ လှယျတယျ။ ဒါပမေဲ့ စိတျပွလှေယျတယျ … ။
ဒါကွောငျ့မို့ သူတို့ဟာ ခဈြစရာ ကောငျးနတေတျ ကွပွနျရော ခဈြသူ အပျေါ အနိုငျယူလို တဲ့စိတျ ရှိတယျ။ကိုယျ့ခဈြသူကို ကိုယျ့ရဲ့ အလိုကအြတိုငျး ဖွဈစခေငျြတဲ့သူမြိုး။ အရမျးလညျး ခဈြတတျ ကွတယျ။
အခဈြကွီးပွီး အခဈြ အတှကျဆို တဇှတျထိုး နိုငျတဲ့ သူတှပေါ။ ဒါ့ကွောငျ အခဈြရေးမှာ ကံညံ့တယျလို့ နညျးနညျး ပွောရမယျ။ ဦးဆောငျလို စိတျ ပွငျးပွတယျ …. ။နရောတကာ ဆရာကွီး လုပျတဲ့ သူမြိုး မဟုတျပမေဲ့ ဦးဆောငျနိုငျတဲ့ အရညျအခငျြး အပွညျ့အဝ ရှိသူတှပေါ။
မိသားစု ကိုလညျး ခဈြတတျ ကွတယျ။ အပေါငျးအသငျး မကျတယျ။ ဘယျနရောမှာဖွဈဖွဈ သူတို့က ဦးစားပေး နံပါတျ တဈ ဖွဈခငျြတဲ့ သူမြိုးတှပေါ။သူငယျခငျြးတှေ အပျေါ အမွဲ အနဈနာခံတတျတယျ … ။
ခံစားရတာတှေ ကိုလညျး မြိုသိပျ ထားတတျ ကွတယျ။ ဒါကွောငျ့ အမြားရှမှေ့ာ ပွုံးပြျောနပေမေဲ့ ကှယျရာမှာ တိတျတိတျလေး ကြိတျပွီး ခံစားတဲ့ သူမြိုးတှပေါ။အထူးအခွားဆုံး အခကျြက တနင်ျဂနှေ သားသမီးတှကေ အစှဲအလမျး ကွီးလှနျးတာ ပါပဲ … ။
ချစ်သူအပေါ် အနိုင်ယူ လိုတဲ့ စိတ် ရှိတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ့်ရဲ့ အလိုကျ အတိုင်း ဖြစ်စေချင်တဲ့သူမျိုး။ အရမ်းလည်း ချစ်တတ် ကြတယ် … ။တနင်္ဂနွေ သားသမီးတွေက အရမ်းကြီး မထူးဆန်းပေမယ့် အခြားလူတွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ စရိုက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထား သူတွေပါ။ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ အခြားလူတွေနဲ့ ကွဲပြားနေတတ် ကြပါတယ် … ။တနင်္ဂနွေ သားသမီးတွေဟာ စာဖတ် ဝါသနာ ပါကြတယ်။ ဗဟုသုတကို လိုက်စားတယ်။
အအိပ်မက်တယ်။ အစားမကြီးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခဏ ခဏ စားနေတတ် တာမျိုး၊ ဒေါသကြီးပေမဲ့ ကောက်ရိုးမီး လိုမျိုး။ခဏပဲ ပြီးရင် သူမဟုတ် သလိုမျိုး၊ စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက် လွယ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ပြေလွယ်တယ် … ။
ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ဟာ ချစ်စရာ ကောင်းနေတတ် ကြပြန်ရော ချစ်သူ အပေါ် အနိုင်ယူလို တဲ့စိတ် ရှိတယ်။ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ့်ရဲ့ အလိုကျအတိုင်း ဖြစ်စေချင်တဲ့သူမျိုး။ အရမ်းလည်း ချစ်တတ် ကြတယ်။
အချစ်ကြီးပြီး အချစ် အတွက်ဆို တဇွတ်ထိုး နိုင်တဲ့ သူတွေပါ။ ဒါ့ကြောင် အချစ်ရေးမှာ ကံညံ့တယ်လို့ နည်းနည်း ပြောရမယ်။ ဦးဆောင်လို စိတ် ပြင်းပြတယ် …. ။နေရာတကာ ဆရာကြီး လုပ်တဲ့ သူမျိုး မဟုတ်ပေမဲ့ ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်း အပြည့်အဝ ရှိသူတွေပါ။
မိသားစု ကိုလည်း ချစ်တတ် ကြတယ်။ အပေါင်းအသင်း မက်တယ်။ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် သူတို့က ဦးစားပေး နံပါတ် တစ် ဖြစ်ချင်တဲ့ သူမျိုးတွေပါ။သူငယ်ချင်းတွေ အပေါ် အမြဲ အနစ်နာခံတတ်တယ် … ။
ခံစားရတာတွေ ကိုလည်း မျိုသိပ် ထားတတ် ကြတယ်။ ဒါကြောင့် အများရှေ့မှာ ပြုံးပျော်နေပေမဲ့ ကွယ်ရာမှာ တိတ်တိတ်လေး ကျိတ်ပြီး ခံစားတဲ့ သူမျိုးတွေပါ။အထူးအခြားဆုံး အချက်က တနင်္ဂနွေ သားသမီးတွေက အစွဲအလမ်း ကြီးလွန်းတာ ပါပဲ … ။